ဆီးချိုဝေဒနာရှင်များအတွက် လိင်မှုဘဝအကြံပေးချက် ၁၀ ချက် - Hello Sayarwon
ဆီးချိုဝေဒနာရှင်များအတွက် လိင်မှုဘဝအကြံပေးချက် ၁၀ ချက်
သွေးထဲကသကြားဓါတ်ပမာဏက လိင်ဆက်ဆံစဉ်မှာဘယ်လိုခံစားရတယ်ဆိုတဲ့အပေါ်သက်ရောက်မှု အတော်ကြီးပါတယ်။ ကောင်းကျိုးနဲ့တော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဆီးချိုလိုရောဂါတွေက လိင်မှုဘဝမှာ အတက်အကျတွေ ဖြစ်စေပါတယ်။ ဒီရောဂါဖြစ်ပြီဆိုရင် အခြားသူတွေ လိုစိတ်ကျေနပ်မှုတွေရတော့မှာမဟုတ်ပဲ သူများတွေမှာမရှိတဲ့ အခက်အခဲတွေရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ သတင်းကောင်းကတော့ ဒီလိုလက္ခဏာတွေကို ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ရမလဲဆိုတာ နားလည်ပြီဆိုရင် သင့်လိင်ကျေနပ်မှုရအောင် မြင့်တင်နည်းတွေသိလာနိုင်ပါတယ်။
1. Toy အသစ်ရှာပါ
လိင်မှုကိစ္စက မကြာမီကနည်းနည်း (သို့မဟုတ်အများကြီး) အားလျော့လာတယ်လို့ ခံစားရပါလျှင်, ဆီးချိုရောဂါကြောင့်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဆီးချိုရောဂါဟာ မလိင်အင်္ဂါကို သွေးစီးဆင်းမှုလျော့ကျစေပြီး အာရုံခံစားမှုနဲ့ စိတ်ကြွမှုကို လျော့နည်းစေနိင်ပါတယ်။ လေ့လာရေးတွေအရ ဆီးချိုရောဂါသည်တွေဟာ သွေးကြောအပြောင်းအလဲများနှင့်အာရုံကြောပျက်စီးမှုတွေကြောင့် အခြားသူတွေလို လွယ်လွယ်ကူကူ orgasm (ပြီးမြောက်မှု) မဖြစ်တတ်ပါ။ တိုတိုပြောရရင် သင်orgasm ရာက်ဖို့ လုပ်နေကျနည်းတွေက အလုပ်ဖြစ်မှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။ အသစ်တစ်ခုကိုကြိုးစားကြည့်ဖို့ အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ နှိုးဆွမှုရဖို့ အမြန်ဆုံးလမ်းတစ်ခုကတော့ vibrator (တုန်ခါစက်) ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ရွေးချယ်တဲ့အမျိုးအစားက Clitoris (မအင်္ဂါစေ့ကို) နှိုးဆွပေးနိုင်တဲ့ ထဲကဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။ မအင်္ဂါထဲထည့်တဲ့ ကြီးနေမာနေတဲ့ အမျိုးအစားတွေကသိပ်ထိရောက်မှာမဟုတ်ပါ။
2. pH ပမာဏကို ဂရုစိုက်ပါ။
သွေးသကြားဓါတ်အဆင့်တက်နေတာက သင့်ရဲ့လိင်အင်္ဂါ pH ပမာဏကို ကမောက်ကမဖြစ်စေပြီး နာတာရှည်မအင်္ဂါ ပိုးကူးစက်မှု ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။pH တက်တဲ့အခါမှာ, သင့်လိင်အင်္ဂါအတွင်းက ကျန်းမာတဲ့ lactobacilli ဘက်တီးရီးယားတွေရှင်နိုငိတော့မှာမဟုတ်ပဲ ပိုးတွေ မှိုတွေပေါက်ကာ vaginosis ရောဂါဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဘက်တီးရီးယားပွားနှုန်းထိန်းဖို့ နည်းတစ်ခုက OTC vaginal ဂျယ်လ် တစ်ပတ်နှစ်ကြိမ် သုံးဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
လိင်ဆန္ဒမြင့်ပေးနိုင်တဲ့အစားအစာတွေဆိုတာ စားနေကျထဲက ခွဲထွက်ထားတဲ့ အစားအစာဆန်းတွေမဟုတ်ပါဘူး။ အချို့သောအစားအစာများကိုစားသုံးခြင်းက သင့်လိင်ဆန္ဒကို ကောင်းကျိုးသက်ရောက်နိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ လူသိများတဲ့အယူအဆကို သိပ္ပံနည်းနဲ့ အတည်ပြုထားပါတယ်။Zinc ဓါတ်ဟာ testosterone ဟော်မုန်းထုတ်လုပ်ရာမှာ ကူညီခြင်းဖြင့် လိင်စိတ်တက်စေပါတယ်။ ကမာကောင်တွေမှာ အခြားမည်သည့်အစားအစာထက်မဆို zinc ဓါတ်ပို ပါဝင်ပါတယ်။ အခြား ရနိုင်တဲ့ အစားအစာတွေကတော့ အနီရောင်အသားများ (အထူးသဖြင့်လျှင်, မြက်ကျွေးပြီးမွေးထားတဲ့ ကျန်းမာသန်စွမ်းမှုလည်းရှိတဲ့အမဲသား) , ကဏန်းနှင့်သီဟိုဠ်စေ့တို့ပါဝင်ပါတယ်။
4. သင့်ရဲ့ဂလူးကို့စ် ပမာဏကိုထိန်းချုပ်ပါ
သိသာတာကတော့ ဒီအချက်ကို ခန္ဓါကိုယ်တစ်ခုလုံးအတွက်လိုအပ်တာဖြစ်ပြီး သင့်ရဲ့မလိင်အင်္ဂါကို လည်း ကောင်းကျိုးပေးပါလိမ့်မယ်။ သွေးတွင်းသကြားဓါတ်ကို ပုံမှန်ပမာဏမှာထိန်းထားတာဟာ အာရုံကြောပျက်စီးမှုကိုကာကွယ်ပေးခြင်း၊ သွေးကြောပျက်စီမှုမှကာကွယ်ပေးခြင်း ၊ သင့်ရဲ့လိင်အင်္ဂါရောဂါကူးစက်မှုကိုတားဆီးပေးခြင်း စတဲ့ အကျိုးတွေရနိုင်ပါတယ်။ ဂလူးကိုစ့်များတဲ့ အစာတွေစားမေယ့်အစား အစေ့, ပရိုတိန်း, သစ်သီးများနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ စားပါ။ ကယ်လိုရီပမာဏစောင့်ကြည့်တာလည်း မရှိမဖြစ်အရေးပါပါတယ်။ အစားအစာနည်းနည်းစားတာက အင်ဆူလင်ထုတ်ပေးတဲ့ ဆဲလ်တွေကို နှိုးဆော်မှုနည်းစေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပိုထိရောက်ပြီး ပန်ကရိယအတွင်းက အင်ဆူလင်ထုတ်ပေးတာကို တားနေတဲ့ အဆီပို တွေကို ဖယ်ထုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
သုတေသနတွေအရ လေ့ကျင့်ခန်းတွေက ဆီးချိုရောဂါ လက္ခဏာတွေ နောက်ပြန်ဆုတ်အောင်လုပ်ပေးတဲ့ အခန်းကဏ္ဍမှာပါဝင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သင့်လိင်မှုဘဝဘဝမှာလည်း နှလုံးသန်မာစေခြင်း ၊ ပျော့ပြောင်းစေခြင်းနှင့်သက်လုံတိုးတက်အောင်လုပ်ပေးနိုင်ခြင်း စတာတွေနဲ့ သင့်ကို အံ့သြသင့်စေမှာပါ။ မာရသွန်လျောက်ဖို့အထိမလိုပါ။ ယောဂလို သာမန် လှုပ်ရှားမှုတွေက အရေးကြီးသောအင်္ဂါများသို့ သွေးစီးဆင်းမှုကိုတိုးမြှင်ပေးခြင်းဖြင့် လက်ချောင်းနဲ့ခြေချောင်းကဲ့သို့ အာရုံကြောပျက်စီးမှုရှိနေတဲ့နေရာတွေမှာပါ ခံစားမှုပြန်ရလာနိုငိပါတယ်။
6. Sugar free ချောဆီကိုသုံးပါ။
ချောဆီကတော့ လူတိုင်းရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှိုးဆမှု ပစ္စည်းတစ်ခု ဖြစ်ပေမယ့် ဆီးချိုရောဂါရှင်တွေမှာတော့ သုံးမယ့် lubes ကို စောင့်ကြည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ တချို့ချောဆီတွေမှာ glycerin နှင့် propylene glycol လို သကြားဓါတ်တွေပါဝင်ပြီး pH ကိုပျက်စေကာ မှိုကူးစက်ရောဂါတွေဖြစ်စေတတ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့လိင်အင်္ဂါအတွင်းက ရှိပြီးသား သကြားဓါတ်ကို ပိုပြီးထပ်ထည့်လိုက်သလို ဖြစ်သွားပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပါဝင်ပစ္စည်းစာရင်းကို သေချာကြည့်ပါ။ ဆီလီကွန်ပါဝင်တဲ့ lube ကိုရွေးချယ်ပါ။
အခြား ဆီးချိုရောဂါသည်တွေလို သင့်ဆရာဝန်က သင့်အလေးချိန်ချဖို့လိုတယ်လို့ပြောပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာ ခန္ဓါကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဆိုးရွားတဲ့ ခံစားချက်တွေကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလို စိုးရိမ်ပူပန်နေတာဟာ ဆီးချိုရှိမှမဟုတ်ပါ။ မကြာသေးခင်က လေ့လာမှုအရ အိမ်ထောင်သက်ရှည်တဲ့ ယောက်ျားရော မိန်းမတွေပါ လိင်ဆက်ဆံစဉ်အတွင်း သူတို့ ခန္ဓါကိုယ်အပေါ်မကောင်းမြင်စိတ်ရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။ အထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးတွေဟာ သူတို့ရဲ့ အဖော်ဖြစ်သူ ဘယ်လိုတွေးမလဲဆိုတာ စိုးရိမ်ကြပါတယ်။
လူအများစုဟာ လုံလောက်အောင် မအိပ်စက်ကြပါ။ အထူးသဖြင့် ဆီးချိုရောဂါသည်တွေမှာ အိပ်စက်ခြင်းက အရေးကြီးပါတယ်။ အိပ်စက်ခြင်းက သွေးတွင်းသကြားဓါတ်ထိန်းချုပ်ရာမှာ အရေးပါပါတယ်။ လေ့လာမှုအရ တစ်ညအိပ်ချိန် ၆ နာရီထက် နည်းတဲ့သူတွေမှာ သွေးတွင်း သကြားဓါတ်မြင့်ဖို့ ၃ ဆပိုများတာတွေ့ရပါတယ်။
သတ်မှတ်ထားတဲ့ ညမှာ လိင်မှုကိစ္စပြုဖို့, သင့်အဖော်နှင့်ဆက်ဆံရေးကို ဆက်ထိန်းထားနိုင်ဖို့ အခြား နည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်။ လိင်ဆက်ဆံမှုအဆင်ပြေအောင်ကြိုးစားတယ်ဆိုတာ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ ကိုယ်အနေအထားတွေ လုပ်တာမဟုတ်ပါ။ လိင်ဆက်ဆံမှု (intercourse) မပါပဲနဲ့ လည်း ဆွဲဆောင်မှုရှိအောင် နေနိုပါတယ်။ ရုပ်ရှင်ကြည့်စဉ်အတွင်း ပွေ့ဖက်ခြင်း၊စုံတွဲစာပေဖတ်ရှုခြင်း၊ ဒါမှမဟုတ် စုံတွဲများလို အစားအသောက်တူတူစားတာ နှိပ်နယ်တာတွေကလည်း သင်တို့၂ဦးဆက်ဆံရေးကို တက်စေပါတယ်။
10. ကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦး ကိုရှာပါ။
ဘယ်သူမှ စိတ်ကျေနပ်မှုမရျှိတဲ့ ဘဝမှာနေစရာမလိုပါဘူး။ သင့်ကို ကူညီမယ့်သူတွေရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆီးချိုရောဂါသည်ဖြစ်နေလျှင် ပိုရှာဖို့လိုပါတယ်။ ဆီးချိုရောဂါရှိတာဟာ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေရှိတာ မှန်ပေမယ့် ဒီနယ်ပယ်မှာ မကျွမ်းကျင်တဲ့ဆရာဝန်နဲ့ တွေ့တာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သင့်ဆရာဝန်ကသင့်ပြသနာတွေကို မဖြေရှင်းနိုင်ဘူး ဆိုပါက university based sexual clinic. တစ်ခုမှာရှာဖွေပါ။
Holly C. Cobbert. 10 essential sex tips for diabetics. www.prevention.com/health/diabetes/type-2-diabetes-and-sex. Accessed June 25th, 2015.